Sekuvulwe isikhwama sokusiza u DJ20. -
Sekuvulwe isikhwama sokusiza u DJ20.
U 20 ngumculi we Rumba ozakhele igama ngokusebenza leqembu le Mlambos Express Band kusukela emyakeni yokusungulwa kwalo laze laduma lakhula , wasephuma kuleloqembu ekuqaleni konyaka ka 2017. Eqenjini le Mlambos ubengumdlali wesiginci ephinde ebengumdlali wonyawo .
u20 osungule i DJ 20 & Ochestra Bambadzi Sounds ngonyaka ka 2017 usuke wakhuthalela umculo wakhe ngemva kokuthola imishina yokudlalisa emcimbini oyithengelwe ngamadoda ako Majamule. u 20 leqembu lakhe bakhipha amadlalade amabili ngonyaka owodwa okungajwayelekile emculweni weTshova tshova , elinye laduma ngokuthi Majamule elinye ngo Balandeli.
Kuthe ke lonyaka umyaka wangabi mnandi kuye nanku uvelelwe yinkemenkeme yendaba . Esekhaya elizweni lokuzalwa lapha ade ezama khona imicimbi yokujabulisa abantu usuke wavelelwa yinkinga yokutshaya yizulu laphansi. “usuke wabanenkinga umfana ubesesebenzela ekhaya etshaya khona manje ngani usuke waba lenkinga watshaywa lizulu laphansi ngakho selenkinga yamehlo kasaboni kahle” kutsho u Gesh Ncube oke wasiza u 20 kwezomculo. “ube ngasakhulumi njalo selenkinga yenyawo kodwa lokhu kubangcono” kulandisa uNcube.
Eyizwa lindaba amadoda aphethe umculo we Rumba kwele Mzansi Africa ayithathele phezulu , okwenze ahle enza inhlanganiso yokusiza u 20 , “Kuvumelekile ukuthi ubani lobani ephosele amasheleni kulesi isikhwama esivulelwe ukusiza u 20 , kungakhathalekile ukuthi ngumlandeli we Rumba noma ngumculi. ukusiza abaculi sike sakwenza phambilina ngokusiza umfoka Mathe odume ngelika Boyoyo” kulandisa u Dwala the Rock ongomunye wabaphambili enhlanganweni yokusiza u 20.
kwabafisa ukusiza ungatshayela kulezi nombolo 078 084 9045 kumbe 082 223 4055